Xaaladda dadkii afduubka loogu haystey Aljeeriya oo aan kala caddeyn • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xaaladda dadkii afduubka loogu haystey Aljeeriya oo aan kala caddeyn
Xaaladda dadkii afduubka loogu haystey Aljeeriya oo aan kala caddeyn
Dalka Aljeeriya 30 qof oo kamid ahaa kuwii afduubka loogu haystey goob Gaaska laga qodo, ayaa waxaa diley kuwii afduubka u haystey, waxaa sidaas shegay hay’adda amniga ee Aljeeriya. Xaaladda goobtaas ayaa ah mid aan kala caddeyn ilaa iminka in hawlgalkii dhamaadey iyo in kale.
Goobta afduubkan ka dhacay ee shirkadaasi Gaaska soo saarta oo ku taal magaalada Amenas ayaa waxaa si wadajir ah uga hawlgala sadex shirkadooda oo kala ah BP oo Ingiriiska laga leeyahay, Statoil oo Norway laga leeyahay iyo Shirkada Batroolka ee Aljeeriya oo lagu magacaabo Sonatrach.
Shalay galabnimadii (Khamiis) ayaa xukuumadda Aljeeriya sheegtey in ay so afjartey hawlgal ay ku soo furnaysey dadkii afduubka loo haystey. War gadaal ka soo baxay ayaa sheegaya in Ciidamadu ay xaqiijiyeen amaanka shaqaalihii ku sugnaa guryaha goobtaas looga dhisey, waxaana weli baaritaan ku socda hawlgalka ku dhamadey dhiiga lagu qubeystey.
In badan oo ka mid ah, dadka afduubka loo haystey xaaladoodu waa mid aan la ogeyn.
Tirada saxda ah ee ku dhimatey hawlgalka dhiiga badan ku daatey ayaa la ogaan karaa marka la soo daayo dhamaan kuwa ku harsan gacanta kooxd aafduubatey, Waxaase hadda laga soo xiganayaa xukuumadda Aljeeriya in 30 kamid ah kuwii afduubka loo haystey ay dhinteen, waxaana ka mid ahaa 7 ajaaniub ah oo u kala dhashey dalalka Britian, France iyo japan.
Xukuumadda Aljeeriya ayaa sheegtey in ay ku khasbanaayeen in ay weeraraan goobta kadib markii xiriirka iyaga iyo kuwa afduubka sameeyey uu kala go’ay.
Mid u dhashey dalka Ireland oo ka soo baxsadey kooxda Afduubatey ayaa sheegay in ciidanka Aljeeriya ay goobta hub culus ku garaaceen, in badan oo kamid ah dadka afduubka loo haysteyna ay dhinteen, Ninkan ayaa waxaa surka uga xirnaa waxyaabaha qarxa taas oo ay ku xireen Kooxda Islaamiyiinta ah ee afduubka geystey.
Qiyaastii 200 oo qof ayaa afduubka loo haystey kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 40 qof oo u dhashey dalal aan Aljeeriya ahayn.
Dowladda Aljeeriya ayaa lagu canaantey qaabka ay u maamushey hawlgalka, waxaana qaar kamid ah dalalka ay u dhasheen shaqaalaha ku sugnaa goobtaas ay sheegeen in aan waxba lagala socodsiin qaabka ay dooneyso xukuumadda Aljeeriya in ay u soo deyso dadkaas.
Kooxda Afduubkan ka danbeysa ayaa loo yaqaan ”Masked Brigade” waxayna kamid yihiin kooxda Al Qaida ee Galbeedka Afrika, waxayna sheegeen in weerarkan ay uga soo horjeedaan Ogolaanshaha dowlada Aljeeriya ay siisay Dowlada Faransiiska diyaaradaheeda inay adeegsadaan hawadeeda, xili Faransiiska weerar ku wado kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama dalka Mali.